Maka: ukufunda ngomatshini | Martech Zone
Maka: ukufunda ngomatshini
Lwesine, ngoFebruwari 11, 2021 Lwesine, ngoFebruwari 11, 2021 Douglas Karr
Imagga sisisombululo sokwamkelwa komfanekiso siyinto inye kubaphuhlisi nakumashishini ukuze babandakanye ukwamkelwa komfanekiso kumaqonga abo. I-API ibonelela ngemininzi yeempawu, kubandakanya: Ukwahlula-hlula ngokwazo-Hlula ngokuzenzekelayo umxholo womfanekiso wakho. I-API enamandla yokuhlelwa komfanekiso kwangoko. Umbala-Vumela imibala izise intsingiselo kwiifoto zemveliso yakho. I-API enamandla yokutsalwa kombala. Ukulima -Yivelisa ngokuzenzekelayo izithonjana ezintle. I-API enamandla yokuqhawula umxholo. Uqeqesho lwesiqhelo-Qeqesha umfanekiso we-Imagga we-AI ukuze uququzelele ngcono
Xa inkampani yam incedisa kwaye iqhuba uhambo lwenguqu yedijithali kwiinkampani zeshishini, sigxila kwiindawo ezintathu eziphambili-abantu, iinkqubo kunye namaqonga. Emva koko senza umbono kunye nemephu yendlela yokunceda inkampani ukuba isebenze kwaye yakhe ukusebenza ngokukuko ngaphakathi kunye nokuguqula amava abathengi ngaphandle. Kukuzibandakanya okunzima okunokuthatha iinyanga, kubandakanya iintlanganiso ezininzi kunye nobunkokeli kunye nohlalutyo olunzulu lwedatha, amaqonga kunye nokudityaniswa okuxhomekeke kwishishini